Cellularline nzo na ikuku ikuku na mkpuchi na nso ya maka iPhone X | Akụkọ akụrụngwa
Cellularline nzo na wireless Nchaji na-ekpuchi na ya nso maka iPhone X
Cellularline bụ akara nke na-abanye nwayọ n'ahịa mba, na-egosi ezigbo ọrụ emere na mba ndị dịka Italy ma ọ bụ Germany ebe ha ghọrọ akara aka rue ekwentị ngwa ngwa metụtara. Taa, anyị na-ewetara gị ilele ikpe kachasị ọhụrụ yana chaja ikuku ọhụụ nke Cellularline wepụtara maka iPhone X.
Ọnụ Apple a aghọwo ezigbo nkwupụta maka ụdị ngwa, karịsịa ekele eziokwu ahụ bụ na nke mbụ wireless wireless Nchaji esịne ke Apple si nso nke telephony -akpọ iPhone 8 na 8 Plus-, na bụ ya mere a ọhụrụ ahịa na-emeghe inyocha.
1 Ikuku Nchaji Ọsọ Ikuku
2 Mmetụta dị iche iche
3 Bompa Ikuku Okpokoro
Ikuku Nchaji Ọsọ Ikuku
Ikuku chaja chaja guzoro bu chaja batrị ikuku nke ejiri aka di nro mechie nke na-eme ka smartphones di na teknụzụ na-acho wireless na ndi dakọtara na teknụzụ na-ebu ngwa ngwa na oke ọsọ. Ekele ya na igwe ikuku ikuku ya abụọ, ekwentị nwere ike ịkwụghachi site na itinye ya n'ụzọ ọ bụla, ebe usoro nkwado nke nkwado na-enye ohere ịnweta nchepụta nke na-enye ohere ịmekọrịta na ịlele ekwentị ahụ n'ụzọ dị mma n'oge oge nkwụ ụgwọ. Anyị anwalela mbipụta ọcha na foto egosipụtara na ọ gosipụtara arụmọrụ dị mma. Anyị na-echeta nke ahụ Ọ gụnyekwara ike ọkọnọ ya ma kwadebe ya yana sistemụ ọkụ ọkụ nke na-enye ohere iji nyochaa ntinye ọrụ nke ụgwọ ụgwọ. Nwere ike ịzụta ya site na 29,99 euro na ndị isi dị ka MediaMarkt.
Mmetụta dị iche iche
Ejiri ihe mmetụ dị nro nke dị mma na emetụ aka ma jupụta ya na microfiber dị nro, na-eguzogide ọkọlọtọ, ikpe Sensation na-enye gị ohere iji akọ chebe ekwentị gị. Ọ bụ ezigbo anyị nwalere na mbụ site na Apple n'onwe ya na nke bụ eziokwu bụ na ọ dabara dị ka uwe aka. Nwere ike nweta ya na Amazon si 30 euro.
Bompa Ikuku Okpokoro
Ulo ikuku ohuru nke di na bompa na-enye ohere kacha ike na ntisa nke ebili mmiri nke mberede nke ekwentị, ma ebe ndi ozo na-acho ka ukwuu nchedo nke ihuenyo na azụ nke smartphone, gụnyere igwefoto. Nwere ike nweta ya na Amazon si 30 euro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Cellularline nzo na wireless Nchaji na-ekpuchi na ya nso maka iPhone X
Xtorm Freedom, ezigbo ọkwa Qi ruru ọsọ ọsọ na-akwụ ụgwọ ntọala
Google, Facebook na ndị ọzọ gaara agbanyeworị GDPR